Yini ongayinika emshadweni we-agate? Izipho zomshado we-agate. Yini ongayinika umshado we-agate?
Ubudlelwane Wedding I-Wedding Anniversary
Izibonelo ezimbalwa zezipho ongazinikeza emshadweni we-agate.
Njalo yonke inkumbulo yokuphila okuhlanganyelwe kufanele igubha, ngoba lilanga lothando, kubalulekile kulowo nalowo mlingani. Umshado we-Agate - lo ngumnyaka we-14 wokuphila emshadweni ngakho ngifuna ukuwugubha ngendlela ekhethekile. Kubandakanya, ukwethula izipho ezingokomfanekiso, othandekayo ezinhliziyweni, njengaleli gama elimangalisayo.
I-Agate iyitshe eliyigugu eliyigugu. It isetshenziswa ekwakheni imihlobiso ehlukahlukene kanye nokubikezela inhlanhla. Iqiniso liwukuthi ekujuleni kwalo kukhona into engacabangi ngempela. Ukubuka ngaphakathi ungabona izithombe ezihlukahlukene. Ngakho-ke, lo mbhangqwana ungabheka ngaphakathi kwetshe futhi utshele ngalokho abakubonayo. Uma izithombe zabo zihambelana, khona-ke ziye zazuza ukuqonda kwangempela.
Kodwa emuva kwezipho, ngoba lokhu kuyinto yokuqala abantu abashadile nezihlobo zabo abacabanga ngazo. Yini ongayinika emshadweni we-agate?
Izipho zomshado we-agate
Kungcono uma izipho zakho zihlotshaniswa naloli tshe elihle. Ngaphezu kwalokho, namuhla ungathola inombolo enkulu yezinto ezihlukile kuwo.
Izipho ze-agate emshadweni owesifazane
Ngokuqinisekile, isipho esingcono kunazo zonke owesifazane kuzoba yizicabangelo, kodwa kulokhu akuveli kumadayimane, kodwa kusuka e-agate. Ziyinkimbinkimbi futhi zigqamisa ngokuphelele ubuhle obungapheli. Unganikeza:
Izipho ze-agate emshadweni womuntu
Indlela engcono kakhulu yendoda ukuletha amakhofflink amahle. Uma ephuza, ungabonisa ibhokisi le-cigare e-agate. Isipho esinenhlanhla sizoba luhlaka lokwakha nge-agate engenawo. Kuyo ungafaka isithombe somndeni, esizohlala ngaso sonke isikhathi emehlweni okujabulisa iso.
Kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuthi i-agate inempumelelo ekhethekile kubantu. Ususa ngokuphelele imizwelo engemuhle ngisho nokwandisa intuition. Ngakho-ke, isipho sakho singase sibe ngisho nesikhumba.
Yini okufanele unikeze umbhangqwana oshadile umshado we-agate?
Bathi ukugubha umshado we-agate kungcono ukungenzi lutho. Kwanele ukuqoqa etafuleni elifanayo nezihlobo nabangane abasondelene nabo. Ngakho-ke, uzoba nenkampani enhle kakhulu, futhi iholidi ngokwalo liyohlangana ngokuqinisekile futhi linikeze umcimbi ngamunye othandana ithuba lokungena.
Yini ongayenza njengesipho somshado we-agate?
Isipho esiphelele siyoba into efanekisa ubunye. Isibonelo, ungabonisa indebe enhle, eqedelwe ngetshe, kumbhangqwana. Izofanekisela uthando nokuqonda, kanye nokuhlobisa kahle noma yikuphi ukungaphakathi.
Ukukhetha okuhle kakhulu kuyoba yisiteji noma ibhange lezingulube nge-agate engenawo noma i-lendlovu. Konke ngoba izindlovu ziwuphawu lokuphila kweminyaka engu-14 ndawonye. Izipho ezivela kulesi sihloko zibukeka zinhle futhi zihlelekile. Uzokwazi ukukhetha njalo into ekhethekile yendlovu, ngaleyo ndlela ujabulise abenzi bokugubha.
Kuhlale kulungile ukunikeza umbhangqwana isithombe esihle noma iphaneli. Imikhiqizo enjalo evela etsheni ibukeka kahle kakhulu. Bayoba umhlobiso ofanele wekhaya futhi bazokukhumbuza ngaso sonke isikhathi.
Njengoba ubona, akunzima ukukhetha isipho esihle somshado we-agate. Ungaqondiswa izidingo zabashadile, noma ubanikeze into enhle engokomfanekiso, enqunywe nge-agate. Kunoma yikuphi, isipho kufanele sikhanyise uthando lwakho nokufudumala, futhi lokho kuyoba yinto elula kakhulu.
Indlela yokugubha usuku lokugcina lomshado
Indlela yokugubha umkhosi wesibili womshado futhi yisiphi isipho ukuveza isigamu sesibili
Yiziphi zonke izikhumbuzo zomshado ezibizwa ngokuthi?
Isikhumbuzo ngasinye somshado sinalo igama namasiko
Sling nge izindandatho - izindlela zokugqoka
Ingulube ku-sauce enomsoco we-ginger
Amathiphu amahle wokujabula
U-Julia Snigir okhulelwe uvele enqenqemeni yesithombe esingenasici
Ikhukhamba eliqoshiwe elivela emgqonyeni
U-Renata Litvinova, owaziwayo futhi ongapheli
Ipulasitiki esondelene njengendlela yokufashisa imfashini
I-Pepper eyayigcwele isitshalo seqanda ne-ricotta
Incazelo yombono wesikhala somuntu siqu
Ukuzivocavoca ukuthuthukiswa kokuhamba nokusheshisa